China SD5K Bulldozer Mugadziri uye mutengesi | Xuanhua
SD5K ndiyo track-mhando yakazara hydraulic bulldozer ine semi-rigid yakaturikwa, zvemagetsi kudzora tier, maviri-macircuit emagetsi ekudzora hydrostatic kutyaira system, yemagetsi kudzora yakavharwa nzvimbo mutoro kutumira kushandisa hydraulic system. PowerAngle-Tilting blade, otomatiki kuzvidzora yakazvimirira kutonhora system. Iyi modhi yakagadzirirwa enjini inodzorwa neinjini yemagetsi izere neyakaenzana pateni, iine inoenderera ichichinjika kutapurirana uye pivot yekufambisa basa, modular dhizaini uye nyore kugadzirisa uye kugadzirisa; iyo electro-hydraulic yakaenzana kudzora kufamba sisitimu uye chigadzirwa chishandiso chinoita kuti iko kushanda kunyatso uye kugadzikana; Yevanhu-komputa yekudyidzana chiridzwa inoratidzira, yakangwara sevhisi system, yakanyatso kusimbiswa mweya wekugadzirisa cab. Inogona kuve yakagadzirirwa neatatu shanks ripper. Iwo muchina wakakodzera unoshandiswa mukuzorora kana mutoro unorema unoshanda senge kuvakwa kwechiteshi, kuvaka kwekutaurirana, nhandare, purojekiti yemagetsi, guta neguta pasi kufamba, kudzosera kumashure modelling uye kuenzanisa kushanda.
Dozer: PAT (Simba Angle Tilting Nereza)
Kushanda kwehuremu (kusanganisira ripper) (Kg): 13100
Kumanikidzwa kwepasi (kusanganisira ripper) (KPa): 45
Nzira yekuyerera (mm): 1790
Min. kubviswa kwepasi (mm): 315
Kudonha kugona (m): 3.1
Nereza upamhi (mm): 3060
Max. kuchera kudzika (mm): 460
Zviyero zvese (mm): 492230603000
Yakatemwa chimurenga (rpm): 2200
Simba reFlywheel (KW / HP): 97/132
Rated peturu kunwa (g / KWh): 190
Type: Yakajairwa track mhando semi-yakaturikwa
Nhamba yevatakuri vanofambisa (mativi ese): 1
Pire (mm): 190
Upamhi hweshangu (mm): 510
Pamberi (Km / h) 0-10.5
Kudzokera (Km / h) 0-10.5
Max. kumanikidza system (MPa): 19
Pombi mhando: Anoshanduka misha pisitoni pombi
Shanduro kuburitsaL / min: 125
Modularize Imwe-nhanho mapuraneti + Imwe-nhanho spur kudzikisira giya mashandiro
Pashure: SD7K LGP Bulldozer
Zvadaro: SD6K Bulldozer